Lungisa umfanekiso ngeSithunzi / isiphumo sokuqaqambisa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lungisa umfanekiso kunye nesithunzi / isiphumo sokuqaqambisa
Bangaphi kuthi abaye kwenzeka ukuba sinemifanekiso esiyithandayo kakhulu, kodwa ngaphandle kokuyiqonda ukuba sishiywe kukukhanya kancinci okanye sikhanyiselwe kancinci kunokuba besifuna? Izinketho esizicingayo ngelo xesha ngamaxesha amaninzi, cima umfanekiso ngovelwano ukusukela "bekungaba ngumfanekiso obalaseleyo", okanye ukuba sinethamsanqa kwaye sizifumana sikwindawo enye kwiimeko ezifanayo sinelinye ithuba Ukuthatha ifoto kwakhona, kodwa ngeli xesha kucacile.
Ewe, Sukubanexhala nangaphezulu ukuba awungomnye wabo banethamsanqa kukhetho lwesibini olunamagama. Kule tutorial siza kufunda malunga amanyathelo akhawulezayo nelula ukulahla ezo nkcukacha zibonakala zingenakukhetha kodwa ukubuyela kwixesha nakwindawo yokuthatha ifoto entsha.
Nje ukuba kuvulwe umfanekiso wokuqala Photoshop, masiye kwithebhu Umfanekiso-Uhlengahlengiso-Isithunzi / ukuqaqambisa
Nantsi iwindow pop-up eya kuvula apho sinakho lungelelanisa ukukhanya kunye nesithunzi ngokuzimeleyo, kunye kunye.
La ubungakanani, uza kusixelela ukukhanya okungakanani okanye isithunzi sifuna emfanekisweni, ububanzi beetoni bhekisa kwi ngamandla mani sifuna oko kukhanya okanye isithunzi, kwaye ngakumbi sibeka unomathotholo ngaphezulu ndiyazi uya kuwenza mfiliba lo mahluko zezibane kunye nezithunzi, endaweni yoko ukuba sibeka Ubungakanani obuncinci buza kuyenza ibe "bukhali" ngakumbi.
Kwicandelo Useto, ngezantsi, siza kubona iindlela ezimbini:
Ukulungiswa kombala -ukunika into encinci okanye engaphantsi kune indawo yokuhlala ukufota.
Umahluko weSemitone - oku kubonelela umahluko ophezulu okanye osezantsi ngokolungelelwaniso ebesilwenzile ngaphambili.
Izicwangciso ezinesi siphumo baxhomekeke kakhulu kufoto esiyisebenzisayo, kuba ukuba inezithunzi ezininzi kunye nezibane ezingaphantsi, siyakuxhaphaza kuphela isakhelo sokuqala (ukuthatha izithunzi) kwaye ngokuchaseneyo. Kwaye ukuba sinemifanekiso njengoko kunjalo kule meko, ukongeza ekubeni necandelo elinomthunzi omninzi, linecandelo elinokukhanya okuninzi, kufuneka sifumane ukulingana phakathi kwezi zimbini. Ukufezekisa oku sinciphisa i umahluko wehafu.
Okokugqibela ngeli thuba, njengomphumo wokugqibezela, kwaye ngakumbi ukuze amafu angabi ngwevu kangako, siza kudlala nawo amanqanaba emifanekiso entsha uhlengahlengiso lolungelelwaniso:
Le yinto encinci yokudibanisa kwabo bakhuthazwayo qhubeka unikezela ngeenkcukacha kwimifanekiso yakho. Kwizakhelo zefestile, ngezantsi kukho iqhosha lokufikelela ngokukhawuleza kukhetho Ulwahlulo olutsha, apho siya kukhetha Amanqanaba.
Nje ukuba amanqanaba ahlengahlengiswe ukuthanda kwethu, ukusukela sifuna esi siphumo nje izulu, sikhetha wonke umfanekiso (kule meko sisebenzisa ifayile ye- iluphu engqukuva ukuze sikwazi ukukhetha ibhotwe), kwaye sipeyinta umfanekiso ngombala omnyama. Emva kokusebenzisa uhlengahlengiso lokhetho, ukhetho kumnyama ibonisa ukuba kwelo candelo asifuni ukusebenzisa uhlengahlengiso.
Kwaye yile ndlela, ngamanyathelo ambalwa, esinokubuyisela ngayo umfanekiso esiwuthandileyo, kwaye ngentlungu enkulu sikholelwa ukuba kufanelekile ukuba isuswe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Lungisa umfanekiso kunye nesithunzi / isiphumo sokuqaqambisa
Igalelo elihle kakhulu. Ndiyayithanda kwaye bayandinceda. Enkosi kwi-Intanethi.